Quick Grid - ဓာတ်ပုံ Collage Editor & Collage Maker APK ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » quick Grid - ဓာတ်ပုံမှ Collage အယ်ဒီတာ & ကောလိပ်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
quick Grid - ဓာတ်ပုံမှ Collage အယ်ဒီတာ & ကောလိပ်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို APK ကို
❤လျင်မြန်စွာ Grid - ဓာတ်ပုံမှ Collage အယ်ဒီတာ & ကောလိပ်Maker❤
quick Grid သင်အံ့သြဖွယ်ဓာတ်ပုံကိုအပြင်အဆင်, စတစ်ကာ, နောက်ခံ, filter ကိုဖနျတီးဖို့အတှကျအကောငျးဆုံးပါ pic collage ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်, frames.It နှင့်အတူစာသားကိုသင်များပြားလှ layout ကိုဘောင်နှင့်ဓာတ်ပုံ Grid နှင့်အတူမျိုးစုံဓာတ်ပုံများ collage ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းအံ့သြဖွယ်ပိုစတာ template ကိုနှင့်အလွတ်စာတိုပေစစေသည်သာမက ။
"လျင်မြန်စွာ Grid - ဓာတ်ပုံမှ Collage သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို" သင် frame ကိုပုံစံအတွင်းပိုင်းမျိုးစုံဓာတ်ပုံများပေါင်းစပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုစုစည်း App ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ Grid ဓာတ်ပုံမှ Collage သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုသင်ကတတျနိုငျသအရာအားလုံးကိုပေးမယ့်အစွမ်းထက်အယ်ဒီတာနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်း pack မှာများနှင့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သင့်ဓါတ်ပုံများ Collage !. ဒါ့အပြင်စုဆောင်းခြင်းဘောင်ကျော်အချို့သောကြီးမြတ်စတစ်ကာများနှင့်စာသားများထည့်သွင်းဖို့စက်ရုံသည်။
"လျင်မြန်စွာ Grid - ဓာတ်ပုံမှ Collage Editor ကို" လည်းအချို့သောအေးမြ features တွေနှင့်အတူဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ tool ကိုပါရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာ tool ကိုအသုံးပြုခြင်းယခုသင်အတောမသတ်သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒရုပ်ပုံတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ picure ပေါ်သီးနှံ, စတစ်ကာများ, စာသား, frames များကိုလှည့်, အာရုံ, ဆိုးကျိုးများသက်ရောက်မှုန်ဝါး, အရောင် filter ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
quick Grid - ဓာတ်ပုံမှ Collage Editor ကို Features: -
☛ layout ကိုများနှင့်ပျဉ်ပြားနှင့်အတူသင်၏ဓါတ်ပုံများကို အသုံးပြု. မှုန်ဝါးဇယားကွက်ကိုဖန်တီးရန်အစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ collage ထုတ်လုပ်တဲ့
☛အံ့သြဖွယ်သက်ရောက်မှု & filter များနှင့်သင်၏ collage Give
☛အဘိုးမပေးဘဲအတွက် / ထွက် zoom ကိုလှည့်နှင့် re-စီစဉ်သင်၏ဓါတ်ပုံများ
☛သင့်ရဲ့ collage များအတွက် sexy အရိပ် Add
သင့်ရဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့သင်လုပ်ချင်တဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းနေဖြင့်☛ Clip ဓာတ်ပုံများ
☛သင့်ရဲ့ pic ကိုပိုပြီးလူကြိုက်များအောင်ဒင်္ font ကို Add
☛မှ Collage သင့်ရဲ့မဂ္ဂဇင်းနဲ့တူဓာတ်ပုံများ, ပိုစတာ, ဒါမှမဟုတ် Instagram ကိုများအတွက်အပြင်အဆင်အယ်လ်ဘမ်
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကိုသင့်ရဲ့ Collage Share ☛
Grid & ကောလိပ်☛
☛ပိုစတာ Template ကို
လျင်မြန်စွာလည်း Squre Grid collage ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လူသိများ Grid ဓာတ်ပုံဇယားကွက် collage ထုတ်လုပ်သူစတုရန်းအမြန်ဇယားကွက်, instasquare အမြန်ဇယားကွက် collage ထုတ်လုပ်သူရုပ်ပုံ collage ထုတ်လုပ်သူဓာတ်ပုံ collage ရောနှော, ဓာတ်ပုံမှ Collage အယ်ဒီတာ, ဓာတ်ပုံ collage ထုတ်လုပ်သူဓာတ်ပုံ Grid - စသည်တို့ကိုဓာတ်ပုံမှ Collage သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
quick Grid - ဓာတ်ပုံမှ Collage အယ်ဒီတာ & ကောလိပ်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို